जतिसुकै बिजि भएपनी केबल २ मिनेट समय दिएर पढ्नुहोला ! नपढे तपाईंलाई ठुलो पछुतो हुनेछ | सुदुरपश्चिम खबर
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! जतिबेला तपाईंको मृत्यु हुन्छ त्यही समयदेखि तपाईंको पहिचान एक लास बन्न सुरु गर्छ । अरे लास लिएर आउनुहोस्। लासलाई उठाउनुहोस लासलाई सुताउनुहोस यस्तै शब्दले तपाइँलाई बोलाउछन ति मान्छेहरूले तपाइँलाई तपाईंको नामले बोलाउने छैनन् , जसको लागि तपाईंले आफ्नो सम्पुर्ण जिबन बिताउनुभयो ।
त्यसैले , यता उताबाट धेरै सम्पत्ति जम्मा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । राम्रोसँग कमाउनुहोस् , राम्रोसँग खानुहोस् , र राम्रोसँग सुत्नुहोस् । जिबनमा आइपर्ने हरेक चुनौतिलाई स्विकार गर्नुहोस् । आफुलाई मनपर्ने सामनको लागि खर्च गर्नुहोस् ।यति हाँस्नुहोस कि तपाईंको पेट नै दुखोस ।
ति खुशिहरु महसुस गर्नुहोस् । फोटोहरु खिच्नको लागि पागल जसरी पोज दिनुहोस् । एकदम सानो बच्चा जस्तै बन्नुहोस । किनकि मृत्यु जिबनको सबैभन्दा ठूलो लास होइन । लास त त्यो हो , तपाईं जिउँदो भएर पनि तपाईं भित्र जिन्दगी जिउनुको आशा हराउदै गएको छ हरेक पल हाँसी खुशी जिन्दगी बिताउनुलाई नै जिन्दगी भनिन्छ ।
नेपाली श्रीमान प्रदेशमा बितेपनि नेपालमै एकल जीवन बाँचिरहेकी फिलिपिनी बुहारीफिलिपिन्सकी २९ वर्षीय रुजान जोय र धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १० का मोहम्मद मजहर दुबै कतारको एकै कम्पनीमै बिक्रेताको काम गर्थे । एकै कम्पनीमा एकैसाथ एउटै प्रकृतिको काम गर्दा उनीहरूबीच प्रेम भयो ।दुवै अलग अलग देश र समुदायका भएपनि तेस्रो मुलुक कतारमा उनीहरूबीच गहिरो प्रेम भयो । दुवै एकैसाथ बस्न पनि थाले । रुजानभन्दा मजहर २ वर्ष कान्छो थियो । रुजानका अनुसार मजहरले शुरूमा प्रेम प्रस्ताव गरेको थियो । जसलाई सहर्ष स्वीकारेको उनले बताइन् ।
मजहर फेरि वैदेशिक रोजगारीमा गए । यसबीच दुवैले छोरी याजी एन्जेला पाए । छोरी एन्जेला अहिले ५ वर्षकी छन् । छोरी भएपछि रुजान जनकपुरमै सासुससुरासँग बस्न थालिन् । कहिलेकाहीँ माइतीघर फिलिपिन्स पनि जाने आउने गर्थिन् । पछिल्लो पटक मजहर घर फर्किएर आउँदा ५ महिना जति बसे ।त्यही क्रममा रुजान पुनः गर्भवती भइन् । मजहर पुनः कतार काममा फर्किए ।
गत अक्टोबर ५ तारिखमा राति समुद्रमा नुहाउन गएको बेला डुबेर उनको निधन भयो । मजहरका बुवा अब्दुल सहमत मोमिनले भने, ‘त्यहाँको समाचार पत्रमा समुद्रमा नुहाउन जाँदा डुबेर मृत्यु भएको उल्लेख थियो । frommandu